China Digital Print lapel pin ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Lawa maphini ngokuvamile asetshenziswa amakhasimende emicimbini emikhulu yokukhangisa, amalogo enkampani, nemicimbi eyisikhumbuzo.Uzothola amaphinikhodi akho angokwezifiso cishe iviki.
Uma sithola umklamo wakho, sizocela umklami wethu ukuthi akudwebele.Uma usuqinisekisa lonke ulwazi esizokukhiqiza ngokusho komdwebo.Impahla yethu eyinhloko yi-zinc alloy, uma udinga enye impahla, singaphinde sikhiqize. Izibonelo: insimbi engagqwali, ithusi Isikhathi sokukhiqiza: 5-7 izinsuku zebhizinisi ngemuva kokugunyazwa kobuciko. Ukukhiqizwa okusheshayo kuyatholakala.
Izikhonkwane zensimbi zangokwezifiso I-Proudly Made in USA. Ithunyelwa ngezinsuku zebhizinisi ezi-5.
Isinyathelo sokuqala samabheji ethu ngokuvamile siwukuqinisekisa umdwebo bese sihlela ukukhiqizwa.Okokuqala, kuzothatha izinsuku ezingu-3-5 ukwakha umkhiqizo omusha engiwubumbayo.Okwesibili, sidinga ukuphuza imikhiqizo. Kule ngxenye, umthamo wethu wokukhiqiza wansuku zonke cishe u-10000pcs ngomshini ngamunye.Okwesithathu, uma i-PIN ye-lapel yokuphrinta yedijithali yenziwa, sizofaka i-electroplate ngqo umbala owufunayo. Okwesine, phrinta iphethini yomklamo womkhiqizo.Uma sidinga i-epoxy, singayengeza kulo mkhiqizo futhi, okuphinde kube enye inqubo.Ungakhetha isitayela osifunayo!
Izikhonkwane zelepeli zedijithali ze-Offset Digital Print Offset zilungele imiklamo esebenzisa izithombe nemidwebo noma edinga eminye imininingwane emihle ngombala. Ziyinketho efanelekile yomsebenzi wobuciko wangokwezifiso esebenzisa ama-gradient noma izithunzi ezilahlayo. Idizayini ngayinye yangokwezifiso idalwe kusukela kufayela ledijithali, eliphrintwe ngokuqondile ephepheni lekhwalithi ephezulu elinamathiselwe kusisekelo sensimbi, bese inkinobho imbozwa nge-epoxy ecacile ukuze iphele kahle ukuze uvikele iphinikhodi yakho yelapel iminyaka ezayo.
Enziwa kanjani amaphinikhodi okuphrinta okuphrintiwe edijithali angokwezifiso. Ngokungafani ne-koqweqwe lwawo oluqinile, koqweqwe lwawo oluthambile, nezikhonkwane ze-die stuck, amaphinikhodi adalwe kusetshenziswa inqubo yedijithali ye-offset ayisicaba futhi abushelelezi. Izikhonkwane zedijithali zangokwezifiso ziyiphinikhodi yakho yemibala egqamile nemifanekiso eyinkimbinkimbi noma imiklamo. Awekho amathuba emibala egijimayo noma eyophayo, futhi umbhalo ubonakala ucwebile futhi kulula ukuwufunda kungakhathaliseki ukuthi ukhetha maphi amafonti. Izikhonkwane zedijithali ze-Offset zinokuqeda okucwebezelayo okuhlala isikhathi eside. Asikho isidingo sokukhathazeka ngokuqoqwa kothuli noma ukungcola ngoba azikho izindawo ezihlehlisiwe. Iphinikhodi ebushelelezi imelana nokubamba ama-sweaters noma izintambo, futhi zingadalwa kunoma yikuphi ukuma ongakucabanga. Osayizi basukela ku-3/4-intshi ukuya ku-2-intshi, futhi amanani e-oda ayatholakala kusuka ku-100 kuya ku-10,000+.
Okwedlule: Ibheji lephinikhodi le-2D
Olandelayo: Izikhonkwane ze-Lapel ezikhazimulayo
I-Digital Print lapel izikhonkwane